5 mhando dzeSEM mishandirapamwe yeCommerce | ECommerce nhau
5 mhando dzeSEM mishandirapamwe yeCommerce
SEM ndicho chirevo cheKutsvaga Injini Yekushambadzira. Kusvika padanho rekuti patinotaura nezve SEM isu tinowanzo tarisa kune yakabhadharwa yekutsvaga injini mushambadziro kunyange hazvo chaizvo, tiri purists, SEM inoreva chero chiito chekushambadzira mukati meinjini dzekutsvaga, kungave kwakabhadharwa kana kwete. Uye chero zvazviri, ivo vanoshanda sechishandiso chine simba kukudziridza imwe yeakawanda sem semkhankaso kubva zvino zvichienda mberi.
Uku ndiko kukosha kwekushandisa iyi zano mukushambadzira kwedhijitari iyo yekuita kuti izivikanwe imwe yemipiro yayo yakakosha. Nekuti mukuita, usakanganwa kuti SEM iko kushandisa maturusi uye marongero anotibatsira kukwidziridza kuoneka uye kuwedzera kuwanika kwemawebhusaiti nemapeji ewebhu nekuda kwemajini ekutsvaga.
Iwe unozogona kuongorora kuti iwe unogona kuwana akawanda mabhenefiti mune aya marudzi ezviitwa uye nemhando dzakasiyana. Semuenzaniso, nekuda kwe anotsigirwa kushambadzira mune avo injini dzekutsvaga (Google AdWords, Bing Ads kana Yahoo! Tsvaga Kushambadzira) yemhando traffic inogadzirwa kunewebhu. Uye kubva kwaunogona kugadzira mushandirapamwe weaya akakosha maitiro kubva zvino zvichienda mberi.
1 Sem mishandirapamwe: chii chaunogona kuwana?
2 Ita zviito zvinobatsira
3 Tichifunga iro rakakosha
4 Dzidza maitiro ekuvandudza yako AdWords mushandirapamwe
5 Musika wekumisazve
6 Mhanya vhidhiyo mishandirapamwe
Sem mishandirapamwe: chii chaunogona kuwana?
Ehezve, ichi ndicho chimwe chezvinangwa izvo vazhinji veavo vane chekuita nechitoro chepamhepo kana bhizinesi vanozvimisikidza pachavo. Nekuti inogona kuvabatsira kuzadzisa zvinangwa zvavo mune ipfupi nguva kupfuura kuburikidza nemamwe akasiyana, akajairika kana echinyakare masisitimu. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchimiro chakakwana kuti uwane zvimwe zvezvishuwo izvi zvatiri kuzokufumura pazasi:
Muzviitiko zvese, inobvumidza kukurumidza kushambadzira chigadzirwa kana sevhisi ine hukuru hukuru mukuparadzirwa kwayo. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti zvichave zvinogoneka, zvinokwezva huwandu hukuru hwevashandisi kana vatengi.
Iyo inokutendera iwe kukwikwidza zvakaenzana hwaro nevamwe vese vanokwikwidza uye nenzira iyi nezvikuru zvivimbiso zvekubudirira mukuwedzera kwako sebhizinesi mutsara.
Kubva pakuona kwezvehupfumi, hapana mubvunzo kuti kudzoka pane kudyara kunokurumidza kupfuura kuburikidza nemamwe masisitimu ebudiriro. Asi sekureba sekunge nhimbe dzehunhu idzi dzakanyatsogadziriswa kubva pakutanga uye kuti pakupera kwezuva chii chinobatanidzwa mune idzi dzakakosha kesi.
Uye pakupedzisira, iwo mukana wakanaka wekupedzisira kuunza yakanyanya segmented traffic kune webhusaiti yechitoro chedu kana dhijitari yekutengesa.
Ita zviito zvinobatsira
Chero zvazvingaitika, hatigone kukanganwa panguva ino kuti aya marongero atiri kutaura nezvazvo anouya kuzosanganisira zviitiko zvakaita sekutsvaga kwemazwi makuru, kushambadzira kushambadzira uye manejimendi manejimendi. Izvi ndizvo zvinoreva zviito zvemadhijitari uye zvinozivikanwa kune vese sePPC (Bhadhara Per Click) uye CPC (Mutengo Pari Kubaya).
Nekuti mukati memhando dzeSEM mishandirapamwe yeCommerce vanogarisa izvo zvinoita mari yewebhusaiti yekambani yako, chitoro kana yekutengesa pamhepo. Kusvika kune iyo iyo inogona kuve sosi yemari kune yako yehunyanzvi chiitiko. Kunyangwe ichokwadi kuti haisi pasi pekukosha kwemari. Kana zvisiri, pane kudaro, kubhadhara zvimwe zvekushandisa mukutengesa zvemagetsi. Chero nzira, inogona kuve rutsigiro runobatsira kana iwe uchiziva kuishandisa nemazvo kubva zvino zvichienda mberi.
Tichifunga iro rakakosha
Kubva pane iri zano rakatarwa mukushambadzira kwazvino zvinogona kutaurwa pasina kutya kwekukanganisa kuti semhedzisiro yezvose zvataurwa pamusoro, vanogona kuenda kugadzirisa iyo keywords izvo zvichabudirira muSEM zano riri muruoko. Sarudzo yematemu aya ndiyo ichaona kuti ma ads acharatidzwa riini, saka haufanire kurega nguva yekuasarudza kana kumisikidza machisi anozoiswa kwavari.
Kune rumwe rutivi, peji peji ichave iri kuenda kwevashandisi vanodzvanya pane kushambadza, saka zvakare yakakodzera kuongororwa kwepamberi. Kana kushambadza mune yedu SEM mushandirapamwe kuendesa vashandisi kune webhusaiti iyo isingaratidze kuvimbika, isina kukwana kurodha kumhanya kana isina rugwaro rune simba runokurudzira kutendeuka, iyi zano rekutsvaga injini yekutsvaga.
Dzidza maitiro ekuvandudza yako AdWords mushandirapamwe
Kunyangwe optimizations yakakura ichifanira kuitwa kana mumiriri huwandu hwedata huripo, pane zvimwe zviito zvinogona kuitwa zuva nezuva.
Semuenzaniso, mukutanga nhanho SEM mishandirapamwe, zvinokurudzirwa kuongorora mazwi ekutsvaga akakonzera kushambadza. Kunyangwe yapfuura Keyword Research yatipa zviyeuchidzo zvakawanda zvekuvandudza runyorwa rwemashoko asina kunaka, imwe yakagara ichikwanisa kupinda mukati. Nekutarisa izvi uye nekuita zvisizvo mazwi atisingafarire, zvichakwanisika kusatambisa bhajeti pazvikwaniso zvisina basa kukambani inoita mushandirapamwe weSEM.
Iyi yakasarudzika system ichakubatsira iwe kuzadzisa zvimwe zvezvinangwa zvako zvakakosha. Pakati peavo vanoratidzira zvinotevera izvo isu tinonongedza iwe pazasi:
Izvo zvinokubatsira iwe kuziva kukwikwidza kubva panguva ino uye ivo zvirambidzo zvemhando ipi neipi.
Kutengesa: Kana chinangwa chako chiri chekutyaira kutengesa online, muapp, nefoni kana muchitoro
Mikana yekutengesa: Chinangwa chakakodzera kukurudzira vatengi kutora matanho ekugadzira zvinotungamira uye kumwe kutendeuka.
Webhusaiti traffic: Ichi chinangwa ndicho chaunofanira kumaka kana chinangwa chako chiri chekuti vashandisi vakodzera vashanyire webhusaiti yako.
Sezvaungave iwe wakamboona, zvinokupa iwe mukana wakanaka wekutanga mushandirapamwe unoshanda unokubatsira iwe kuti utore kurodha pasi kwekushandisa kwako uye kuti vashandisi vataurirane zvakanyanya nazvo, ichi ndicho chinangwa chakakodzera
Kwamunofanira kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi kuti bhizinesi rega rega rakasarudzika, saka zvinoda chirongwa cheSEM chekambani chakanangana neichi chimiro. Nekuti hapana mashiripiti fomula yeavo vese, sekufunga iwe pane imwe nguva muhupenyu hwako hwehunyanzvi. Kune rimwe divi, usakanganwa kuti zvinokuita iwe kuti usvike kune hombe vashandisi uye kuwedzera mukurumbira wechigadzirwa chako kana sevhisi.
Iyi mhando yemushandirapamwe inokutendera iwe kuratidza kushambadza kune vashandisi vakambove kune yako webhusaiti zvakajairika kana mune chimwe chikamu chikamu. Asi kubva kune imwe nzira yekutengesa kupfuura yakatorwa mukushambadza pachayo. Icho chaicho chimwe chezviitiko zvitsva kwazvo zvinogona kuwanikwa panguva ino mudhijitari kana online chikamu. Nekuti inopa nzira dzekuwedzera zviyero kuti uwane vatengi vatsva kana vashandisi vesangano rako.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganikwa kuti unzwisise zvirinani iri kirasi yemishandirapamwe mukushambadzira kwazvino kuti kudzokorora zvakare kwakakodzera kune avo vashambadzi vanoda kuwedzera kutengesa kwavo nekukanganisa zvekare vatengi vavo pavanotarisa mamwe mawebhusaiti, kana shandisa zvimwe zvinoshandiswa neazvino matekinoroji. Naizvozvo, kushanda kwayo kunogona kuve kwakakura kubva pakutanga kwayo, kunyangwe zvisiri pasina mamwe matambudziko.
Chimwe chinhu chinofanirwa kuongororwa pamwe nekuitwa kwechirongwa chakasarudzika ndechekuti pakupedzisira vashandisi pachavo vanopedzisira vave vatengi vedu. Kuva, kune rumwe rutivi, chimwe chezvinangwa zvedu zvenguva pfupi kubva panguva ino zvichienda mberi. Mushure mezvose, mazhinji ezvedu zviito zvinotungamirwa kumusoro kune aya mazinga muchiito chakaitwa.
Mhanya vhidhiyo mishandirapamwe
Chinangwa chemushandirapamwe wevhidhiyo ndechekusimudzira nekupa kuoneka kushambadziro yako yevhidhiyo, kwete chete papuratifomu yeYouTube, asi zvakare paGoogle Ratidza Network uye nezvimwe zvisingazivikanwe nevashandisi vazhinji. Kubva nemaonero aya, hapana mubvunzo kuti mashandisiro ayo anozopedzisira awedzera kusarudzika kwevashandisi vezvigadzirwa zvedu, zvinyorwa kana masevhisi. Zvekuti nenzira iyi chiratidzo chedu chinozivikanwawo zvirinani uye neimwe nzira iyo iyo branding.
Iwe unogona kunyange kuenda kune zvishoma zvakajairika masisitimu pane avo mhedzisiro Semuenzaniso, mhando dzeshambadziro bato rinofarira richakwanisa kusarudza kuti ione kana kuti kwete uye, nekudaro, mushambadzi achazobhadhara chete kana zvabaya. Mune izvo zvinoita sarudzo yemapeji ewebhu ezvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi ekugutsa zvavanoda kukwezva huwandu hukuru hwevatengi kana vashandisi.
Mupfungwa iyi, kukosha kwezvinoreva kuita mishandirapamwe yemavhidhiyo kunoenda zvinopfuura izvo zvinonzi mabhizinesi echinyakare. Kusvikira pakuti pakupedzisira rudzi urwu rwekushambadzira rine fomati yekuberekesa iyo inogona kunge iri yepamusoro kune mamwe ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 5 mhando dzeSEM mishandirapamwe yeCommerce